Akụkọ - Foton nyefere 2,790 Units New Energy Buses na Beijing
FOTON nnukwu egosi
Foton nyefere 2,790 Units New Energy Buses na Beijing
Na Machị 25, emere nnukwu emume na isi ụlọ ọrụ Foton na Beijing iji gosipụta nnyefe bọs ọhụrụ 2,790 nyere ndị ahịa ha, Beijing Public Transport Group. Na mgbakwunye nke ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke bọs Foton ọhụrụ, ngụkọta nke ụgbọ ala Foton ọhụrụ na-arụ ọrụ na Beijing na-eru nso nkeji 10,000.
N'ememe nnyefe ahụ, Kong Lei, osote onye isi oche nke Beijing Information and Economy Bureau, kwuru na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụgbọ ala Foton ọhụrụ ga-agbanye ike ọhụrụ maka mmelite na mgbanwe nke usoro njem ọha na eze na Beijing.
Zhu Kai, onye isi njikwa nke Beijing Public Transport Group, na-ekwu okwu ọma maka nkwado nke ụlọ ọrụ ya na Foton, na-ekwu na ndị otu abụọ ahụ ga-aga n'ihu ime ka mmekọrịta ha sie ike iji belata nsị carbon na isi obodo. Dabere na Zhu, Beijing Transportgbọ njem Ọha zụtara ọnụ ọgụgụ nke ụgbọ ala 6,466 nke Foton AUV bọs site na 2016 ruo 2018 na ngụkọta nke 10,1 ijeri RMB.
Dịka otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ na ụlọ ọrụ ụgbọ ala ume ọhụrụ nke China, Foton emeela nnukwu ọmarịcha ihe gbasara teknụzụ ọhụụ na azụmaahịa nke ugbo ala ọhụrụ n'ime afọ iri gara aga.
N'ihi ọrụ siri ike ya, Foton rere ụgbọ ala 83,177 wee ree 67,172 nkeji na ọnwa abụọ mbụ n'ime afọ a, site na 17.02% na 17.5% n'otu n'otu.